“ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၃) (ဓါတ်ဖမ်းရင်း ရ ခဲ့ တဲ့ ရီစရာလေးများ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၃) (ဓါတ်ဖမ်းရင်း ရ ခဲ့ တဲ့ ရီစရာလေးများ)	16
“ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၃) (ဓါတ်ဖမ်းရင်း ရ ခဲ့ တဲ့ ရီစရာလေးများ)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 30, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
(ဓါတ်ဖမ်းရင်း ရ ခဲ့ တဲ့ ရီစရာလေးများ)
နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် တစ်မြို့ထဲသား ကိုစိန်သော့နဲ့ ဓါတ်ဖမ်းထွက်ကြပါတယ်။
ဥပုဒ်နေ့ဆိုရင် မနက်အစောကြီးထ တောင်သမန်အင်း စစ်ကိုင်းဘက်ကမ်း အနှံ့သွား။
ညနေခင်းများ တိမ်တွေလှရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သတင်းပေးပြီး
ကျနော်နဲ့သူ စစ်ကိုင်း အင်းဝ ရှမ်းလေးကျွန်း အောင်ပင်လယ် ဧရာဝတီမြစ်နံဘေး
ပုံရိုက်ပြီးလို့သူ့ကိုပြရင်သူက ကျနော့်လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြလို့ သင်ပေးပါတယ်။
သူနဲ့ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းထွက်ချိန် မှာ ပျော်စရာ ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ
ဓါတ်ပုံလာရိုက်တာကို သစ်တောက လူတွေမှတ်လို့ ဆရာချင်းမုိးမွှန်အောင်ခေါ်ပြီး
“လိုတာပြောပါ လိုတာပြောပါ”လို့ လာပြောတဲ့ သစ်ဖောင်သမားနဲ့လဲဆုံရ။
သူတို့က ၀ါးဖောင်အောက်မှာ သစ်လုံးတွေဖျောက်ပြီးသယ်လာတာကိုးဗျ။
သစ်ဖောင်တွေ ကို ကိုယ်က သွားဓါတ်ဖမ်းမိလို့
“ဟေ့လူ ဘာလုပ်တာလဲ “ လို့ လှမ်းရန်တွေ့တာခံရ
လက်ထဲပါတဲ့ ထရိုင်ပေါ့ က ခွေးရိုက်ဒုတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ရ၊
သူတို့ကိုဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေထင်လို့ မျက်ထောင့်နီကြီးတွေနဲ့ ကြည့်တဲ့
ကျူးကျော်တဲ ကလူတွေကို မျက်နှာချိုသွေးလို့သွေးရ၊
ကင်မရာ တကားကားနဲ့လာတဲ့ ကျနော်တို့ကို ဂျာနယ်သမားတွေမှတ်လို့
သူတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်
တွေ့တဲ့လူကိုမေးပြန်တော့သူကလဲရေရေ ရာရာ မသိ၊
တံတားပေါ်ကနေ အောက်ကိုဆင်းပြီး ရပ်ကွက်ထဲလဲရောက်ရော
သူပြောတဲ့အတိုင်း သွားမှ ဘုရားပေါ်တက်ရမယ့်လမ်းကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဘုရားပေါ်လဲရောက်ရော အောက်မှာသစ်ပင်တွေက ပိတ်နေတော့
အောက်ဆင်းတဲ့လမ်းကိုရှာပြီး ခက်ခက်ခဲခဲကို ဆင်းခဲ့ကြတာပေါ့။
နေထွက်လာတော့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တာရပ်ပြီး ပြန်မယ်လုပ်တော့မှ
ကျနော်တို့ ဆင်းလာခဲ့တဲ့နေရာက အမိူက်တွေသွန်တဲ့နေရာဖြစ်နေပြီး
အဲဒီကနေ ၄-၅ လှမ်းလောက်လျောက်လိုက်ရင် အောက်ဆင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာသိရ။
တစ်ခါကပေါ့ ကိုစိန်သော့နဲ့ကျနော် အင်းဝဘက်ကို ကူးတို့ဆိပ်ကနေ
ဘိုလိုလာပြောတာကို ခပ်တည်တည် နဲ့ တိုးရစ်ယောင်ဆောင်ပြီး
လှေက က ကမ်းကပ်လာတော့
” ဘိုသော့ လစ်ကြစို့”လို့ အပြောမှာ
“ဒီကောင်တွေ ဗမာလိုတတ်တယ် ဟ”လို့အံ့သြတကြီးနဲ့ပြောတာကိုကြားလိုက်ရတော့
နောက်ရီစရာတစ်ခုက သီပေါ အကိုကြီး ကိုအေးကျော်လာလို့
ကျနော်နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေ က ဓါတ်ဖမ်းရင်းလူစုကွဲသွားကြပါတယ်။
ကျနော်က တံတားအောက်အရောက် မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့
တရုပ်လူမျိုးတွေကိုတွေ့ရတော့ ကျနော်က မတောက်တခေါက်တရုပ်စကားနဲ့
“ရိုက်ခွင့်ပြုပါ “လို့ ခွင့်တောင်းပြီးတော့ ၀င်ရိုက်ပါတယ်။
အဲ့မှာ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က သူကိုင်ထားတဲ့ကင်မရာကို ပြပြီး
သူက အခုမှစရိုက်သူဖြစ်လို့ ကင်မရာအကြောင်းသိပ်မသိ၊
ဘယ်အနေအထားနဲ့ရိုက်ရင် ကောင်းမလဲပြောပြ ပါဆိုပြီး
ကိုစိန်သော့နဲ့ သူလဲတွေ့ရော အဲ့ကောင်မလေးက
မြန်မာစကားနဲ့ သူ မနေ့ကမှ ကင်မရာဝယ်လာတာ
အဲတော့မှ ကျနော်လဲ တအံ့တသြနဲ့ ခင်ဗျားမြန်မာစကားပြောတတ်လားလို့
မေးတော့ သူက ရီပြီးတော့ ဦးလေးက တရုပ်လိုလာမေးတော့
ကျနော်က ဦးလေး ကိုမြန်မာမဟုတ်ဘူးထင်နေတာလို့လဲ
ပြန်ပြောရော ဘေးနားကလူအားလုံးက ၀ိုင်းရီကြပါတော့တယ်။.
ကျနော်က အသားမဲမဲ အရပ်ပုပု ဗိုက်ရွှဲရွှဲ
ကင်းဘတ်ဖိနပ်နဲ့ဆိုတော့ အာဖရိက က လူလို့များထင်လားမှမသိ။
ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်ကို အချိန်အခါမမေးဘဲ မတ်လရဲ့နေလည် ပိုင်းမှ
တက်ကြလို့ အမော့ဆို့မတတ် ဟောဟဲလိုက်အောင်တက်ကြရတာတွေ၊
ပြင်ဦးလွင်က ပန်းတန်းကို ရိုက်မယ်ဆိုပြီး မှောင်မဲမဲ ဆောင်းတွင်းမနက်စောကြီး
ချမ်းချမ်း စီးစီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လေပေါရင်းသွားကြတာ ပန်းတန်းကျော်ပြီး
ကိုစိန်သော့က ကျနော်မူးလဲတယ် မှတ်ပြီး စိတ်တွေပူခဲ့ရ။
ဆောင်းမနက် စစ်ကိုင်းတံတားကို ဓါတ်ဖမ်းအသွား
နှင်းတွေပိတ်နေလို့ ဘာမှ မရိုက်ရဘဲပြန်လာခဲ့ရ။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးနေပေမယ့် မှောင်တဲ့ အထိ ငှက်သမားက ပြန်လာမကြိုလို့ ရင်တမမနဲ့စောင့်ခဲ့ရ
ကျနော်လိုချင်တဲ့ အကွက်အကွင်းလေးရအောင် အုတ်တံတိုင်းပေါ်တက်ပြီးရိုက်မိပါတယ်။
“မျောက် ကိုချောက်နေတာဘဲ မျက်စေ့နောက်လိုက်တာ”ဆိုတဲ့အသံက ၀င်ကြေးကောက်
တဲ့ တဲထဲက အသံထွက်လာပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ရှေးဟောင်းနယ်မြေတွေမှာ ဘုရားတွေမှာ ကင်မရာသမားကို
ကင်မရာရိုက်သူ တွေကိုဘယ်လိုဝန်ဆောင်မူ့ပေးမယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲမရှိ။
ကိုယ့်နိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှု့တွေကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မှတ်တမ်းတင်ပေးနေပါလားဆိုတဲ့
ဒီနေရာမှာကြုံလို့ပြောချင်တာက ဓါတ်ပုံရိုက်ခ ကောက်ခံတဲ့ကိစ္စပါ။
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ စေတီဘုရားကျောင်းကန် ဥယျာဉ်အတော်များများမှာ
ကင်မရာမြင်တာနဲ့ ကင်မရာခွန်ဆောင်ဘို့ ဇွတ်တောင်းတော့တာပါဘဲ။
ဘာများ ၀န်ဆောင်မူ့ပေးထားသလဲမေးရင် သူတို့မှာအဖြေမရှိပါ။
ဒါကတော့ ဓါတ်ချစ်သူအားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်သင့်တဲ့
(ကင်မရာအခွန်မပေးရေးးးးးးးးး ဓါတ်ဖမ်းသူများ အရေး )
ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ့် ၀ါသနာနဲ့ ကိုယ် လိုတဲ့ပုံရရင်ပြီးရောလို့ဘဲသဘောထားပြီး
Alinsett @ Maung Thura says: .ရေပြာအိုင် ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နေ့ချင်းပြန် ရင်တော့ သွားမရ တစ်ညအိပ်မယ်ဆိုရင် သွားလို့ရမယ် လိုက်လဲ ပို့ပေးနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့် ဆောင်း နဲ့ နွေမှာဘဲ လှတယ် မိုးဆိုရင် မလှတော့ ရေတွေနောက်သွားတတ်တယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဓာတ်ပုံက ဖောင်ပေါ်ကဘ၀များ ပုံကြိုက်တယ်။ ဖောင်အောက်မှာ သစ်လုံးခိုးသယ်တာ အခုမှ သိတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေထက် လေးပေါက် စကားပြောလေးနဲ့ ရေးထားတာ ဖတ်လို့ပိုကောင်းတယ်။
အပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ဝါးဖောင်တွေ အောက်မှာ
အများအားဖြင့် သစ်တွေ ပါတတ်ပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ရေပြာအိုင်က ခုတော်တော် နာမည်ကြီးနေတယ် မန်းလေးကိုရောက်ဖြစ်ပေမယ့် အေးဆေးမရောက်တော့ မသွားခဲ့ရဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်ရောက်ရင် သွားဦးမယ်။ ခု ပုံလေးတွေထဲမျာ သဘောကျတာလေးတွေ အများသား။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင် သွားတဲ့လမ်းမှာ 7မိုင်ချောင်းသာဆိုပြီး အပန်းဖြေစခန်းလုပ်ထားတော့
ကျနော်ရယ် ရွာသားကြီး ကိုစိန်သော့ ဖရဲမ နဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့က တစ်ကြိမ်
ရွာသားဖောဂိုင်းနဲ့ကျနော်က တစ်ကြိမ် ဆိုတော့ နှစ်ကြိမ်ရောက်ဘူးပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: တိမ်ပန်းချီ က ရွှေရောင်ဝင်း နေတော့တာဘဲ။ လှလိုက်တာ။
. ဖောင် တွေမြင်တော့ အတိတ်က အဖွားတို့ ရဲ့ ဝါးဖောင် ဘိဇနက် ကို သတိရမိတယ်။
ခရမ်း ဖျော့ ညနေခင်း လေး ကို အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။
စာတွေ ကို ပုံနဲ့ တွဲကြည့်ရလို့ ပိုပြီး အရသာကောင်း သွားတယ် ထင်တာဘဲ ပြုံး ရေ့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အရင်က ဓါတ်ပုံတင်ရင် နံပါတ်မတတ် ဘာ မတတ်နဲ့ ဒီအတိုင်းတင်တာ
နောက်တော့ ဆရာကြီး မာမီနုက နံပါတ်တတ်ပါလို့ပြောတော့ နံပါတ်တတ် ဖြစ်သွားရော
နောက်ပိုင်းပုံမှာစာလေးတွေရေးတင်တော့ ကြည့်သူတွေက ပိုနှစ်သက်တယ်ပြောတော့
ပုံမှာစာလေးတွေပါ ထည့်ပေးတော့ ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
Ma Ei says: ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ တိမ်ပန်းချီ
စကားစပ်ရရင် ကျမကဓာတ်ပုံကလေးတွေနှစ်သက်တတ်တော့
ရုံးက ညီမလေးတစ်ယောက်ကညွှန်လို့ မန်းဂဇက်ကိုဝင်ကြည့်မိရာကနေ
ဝေေ၀ရဲ့ တိဘက်ဓာတ်ပုံတွေကနေစလို့ ကိုပေါက် တင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ သဘောကျခဲ့
အဲ့ဒီကနေ စာဖတ်သူဖြစ်၊ နောက်တော့ စကားဝင်ပြော၊ ရွာသူဖြစ်လာခဲ့တာ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အွန်လိုင်းမှာမိတ်ဆွေတွေ အများကြီးတိုးပွားလာပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ စာရေးတာ ပုံတင်တာကို တကယ်ကို
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေအတော်များများ က ကိုပေါက် ရေး တဲ့စာတွေ ကို အမြဲဖတ်တယ်
ကိုပေါက်တင်တဲ့ပုံတွေကို အမြဲကြည့် တယ် လို့ပြောတာကို သိရတယ်အခါ
နောက်သူတို့က ကိုပေါက်ပုံတွေကြည့် ရင်း ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း အဆို အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ့်ကျော ကိုယ် ပြန်သပ်ကြည့်တာပါ။
ဂျက်စပဲရိုး says: လူတွေကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်တယ်။
အလှပုံ မဟုတ်ဘဲ ဘဝ ပုံ ရိုက်ချင်တာ။
ခက်တာက အဲ့လို သွားရိုက်ရင် မကြိုက်ကြတဲ့ လူက အများသား ဆိုတော့
(ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ကို ဓာတ်ပုံ လာရိုက်ရင် မကြိုက်ဘူးလေ)
လှတပတ ပုံ ရိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ ထိုင်ပြီး တနေရာရာကို ကြည့်နေတာတို့ နေ့လည်နေ့ခင်း အနား ယူ နေတာတို့
အားပါးတရ ရယ်နေတာတို့ ကို ရိုက်ချင်တာ ဆိုတော့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က မလှမပ ပုံတွေ ဖြစ်နေဖို့ များတယ်။
ဆိုတော့ကာ ဖောင်ပေါ်မှ ဘဝ များ ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံး လို့ ပြောရမပေါ့။
နောက်များ မှ သတ္တိ မွေးပါဦးမယ်ဗျာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုဂျက်ရေ
ကျနော်နောက်ပိုင်းမှာ လှူပ်ယှားသွားလာနေတဲ့ သဘာဝပုံတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အဝေးကနေ တယ်လီနဲ့လှမ်းဆွဲ လိုက်တာများပါတယ်
weiwei says: ကိုစိန်သော့က ကျွန်မရဲ့ ဆရာပါပဲ ..
သူရှင်းပြခဲ့ဖူးလို့ crop လုပ်နည်းကို ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ခဲ့တယ် ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုစိန်သော့ က အင်မတန်စေတနာကောင်းတဲ့
Ma Ma says: ပုံတွေကြည့် စာတွေဖတ်ပြီး ရွာသူဖရဲသီးနဲ့သွားခဲ့တဲ့ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်
ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြီး ရုတ်တရက် အံ့သြသွားတယ်။
နောက်တော့မှ ပြုံးဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ မြင်နေကျ ဘာမှမဟုတ်တာလေးက မြင်တတ် ရိုက်တတ်သူတွေနဲ့တွေ့တော့လည်း စာဖွဲ့လောက်စရာဖြစ်သွားပါလေရော။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါ့ မမရေ
တစ်ခါတစ်ခါ အပြင်မှာ မလှပေမယ့် ဓါတ်ပုံထဲမှာ အတော်ကိုလှနေတာကို မကြာခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်
မန်းဂေဇက်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အမှတ်တရတွေ က ကျနော့်မှာ အများကြီး ရယ် မမရေ